Faallooyinka, hagayaasha, milicsiga iyo fikradaha buugaagta - Ikkaro
Halkan waxaan ka hadleynaa buugaagta. Waan dib u eegaa iyaga, ka faalleeyaa iyaga, kaydiyaa faallada, mowduucyada aan iftiiminayo. Xusuus-qorrada aan ka sameeyo waxyaabaha aan doonayo inaan eego si aan u hubiyo ama wax badan uga barto waxaanan ku xiraa inta kale ee webka.
Waxaan iftiiminayaa fikradaha cusub iyo mowduucyada xiisaha leh. Waa buugaag farsamo iyo waliba qormooyin, sheeko, xitaa gabay.
2 Marxaladaha mashruuca
Qeybtaan cusub waxaan ku dhexgalaa mashruuc shaqsiyeed aan ku lahaa buugaagta, suugaanta iyo milicsiga. Waxaa la oran jiray Isle of Gont oo halkaan ayaan ka sii wadaa. Mashruucii hore waxaan ku koobay maadooyin suugaaneed oo badan.
Hada qaabka loo wajahayo ayaa waxyar ka duwanaan doona waxaana soo bandhigayaa dhamaan dhinacyada aan u arko inay xiisaha leeyihiin hadii aan awoodana waxaan ku xirayaa dhamaan mowduucyada aan wax ka qabanayno. Kaliya ma noqoneyso su'aal suugaaneed.
Waxaan ka faa'iideystay marinka Filomena ee marinka jasiiradda iyo dhibcaha waaweyn ee heerkulka si aan dib ugu akhriyo Dab shid waxaa qoray Jack London.
Sida ku Gabay ithaca waa sheeko yar oo ku duuban daabacaad
Markan daabacadii aan ka iibsaday Boqortooyada Cordelia taasi ayaa la socota sawirrada Raúl Arias iyo tarjumaadda Susana Carral. Daabacaddan waxaa sidoo kale ku jira labada sheeko ee Iftiiminta Bonfire ee uu qoray Jack London. Sannadkii 1907 kii oo ah midka cid waliba ogtahay ee ay ku saleeyaan sawirrada buuggu ku yaal iyo 1902 e oo lagu daray lifaaq ahaan oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu u qoro majallad suugaaneed. Saaxiibka Dhalinyarada.
Waxaad awoodi kartaa hadda ka soo iibso € 7
Seddexdii Xikmad badnaa waxay ii keeneen daabacaadda buug aan runtii jeclaystay inaan haysto. Ithaca ee Cavafis, daabacaadda Buugaagta NordicIyadoo tarjumaadda Vicente Fernández González iyo sawirada Federico Delicado.
Waxay ahayd akhriskeygii ugu horreeyay ee sanadka. Daabacaadda si aad u hesho jawharad yar oo aad u aqriso oo aad u akhrido adoo ku raaxeysanaya sawiradeeda.
U fiirso buug-gacmeedka buug-yaraha si aad u jeclaato
Cudur calaami ah. COVID-19 wuxuu ruxaa adduunka Slavoj Zizek
Waxaan iibsaday oo aan akhriyay qormadan markii la daabacay bishii Meey, ku dhowaad bilowgii cudurka faafa. Waxaan runtii rabay inaan aqriyo Zizek laakiin waxaan u maleynayaa inaan helay buug qaldan si aan isaga ugu soo dhowaado. Uguyaraan waxaan rajaynayaa inuu buugga ahaa ee aanu ahayn qoraaga.
Dareenkayga ayaa sidaas ii sheegay Ma ahayn fikrad wanaagsan in la akhriyo buug ku saabsan COVID-19 iyo aafada bilowgiisa. Wuxuu lahaa dhammaan astaamaha lagu garto inuu yahay lacag qaate. Laakiin dhanka kale waxaan moodayay inaan ka imid falsafad caan ah waxaan jeclaan lahaa inaan helo wax tayo leh. Weli waxaan u maleynayaa inay suurtagal ahayd in la abuuro maxkamad wanaagsan xitaa maalmaha hore ee masiibada. In kasta oo aan lagu salayn wixii dhacay, haa iyadoo la falanqeeyo xaalado kala duwan, aafooyinkii hore, iwm.
Xaqiiqdu waxay tahay in buuggu niyad jab weyn ku dhacay taas Kuma talinayo cidna. Ku dhowaad kaftan.
Waxaan ka qaatay buuggan maktabadda (waad ka iibsan kartaa gudaha Amazon). Waxaan bilaabay aqrinta waxaanan ogaaday wax layaableh. Waxay lahayd qaab yaab leh, cutubyo aad u gaaban, luqad aan caadi ahayn, iyo tanno bir ah. Waxay u ekaayeen maqaal halkii buug laga dhigi lahaa. Waxaan filayay wax la mid ah Taariikhda ugu yar Spain waxaa qoray Juan Pablo Fusi, laakiin waan qaldamay.
Iyo runtii, si fudud u aqrinta jeldiga dambe (wax aanan jeclayn inaan sameeyo) ayaa xaqiijiyay tuhunka. Taariikh Isbaanish ah, waa soo uruurinta maqaallada Arturo Pérez-Reverte uu daabacay in ka badan 4 sano boggiisa Marquette ee kaabista XL Semanal.
Haddii aadan waligaa akhrin tiirarkiisa usbuuc, waxaan ula jeedaa tan:
Dhinaca hoos u dhaca wuxuu ahaa in Sagunto, oo hore u gumaysan jiray Griiga, sidoo kale xulafo la ahaa Roomaanka: qaar ka mid ah turkiga oo xilligaas - qarnigii saddexaad ee Ciise ka hor, xisaabtamayay - ayaa bilaabay inay samaystaan ​​digaagado badda Mediterranean ka. Dabcan. Shimbir la yaab leh ayaa lagu khalkhaliyay, dagaal iyo wixii la mid ah.
Ma jecli buugga mana ku talin karo. Waxaan bilaabay xoog. Aad ayey u xumaatay waxay ahayd akhriskeygii ugu horreeyay ee sanadka. Tanina waxay igu dhacdaa aniga oo aanan bilaabin akhriska sanadka Faa'iidada kuwa aan waxtarka lahayn, dhaqan 2 sano ah oo aanan u oggolaan doonin luminta.
Sida ku saabsan buugga Honoré, waxaan u maleynayaa inuu haysto in ka badan kalabar bogagga haray. Waxaan ka doodayay in aan qoro dib u eegistaan ​​iyo in kale, laakiin maadaama had iyo jeer ay jiraan waxyaabo wanaagsan, waxaan ku dhaafayaa iyaga oo halkan ku qoran hadii ay dhacdo mustaqbalka waxaan rabaa in aan dib u eego mowduuc soo jiitay dareenkeyga. Bartaani ha ii noqoto xusuusteyda.
Awoodda isgaarsiinta ee Ignacio Ramonet
Hore ayaan aqriyay Sida aan u iibino baaskiilka buug in Ignacio Ramonet waxay isla qoreen Noam Chomsky wixii intaa ka dambeeyayna waan la yaabay. Dhanka Chomsky waxaan sii waday aqrinta dhowr ka mid ah shuqulladiisa laakiin Ramonet sidaas ma aanan sameynin ilaa iyo haatan. Oo waxay toos ugu tagaysaa qaybteenna buugaag.
Maquuninta isgaarsiinta waa qormo ku saabsan sida ay u shaqeyso warbaahinta ballaaran ee bulshadeenna. Diirad saarida doorka telefishanka.
Dukaanka buugaagta waa buug weyn oo Penelope Fitzgerald ah. Daabacaaddan weyn ee Impedimenta (sidii had iyo jeerba) tarjumaad loogu sameeyay Ana Bustelo iyo Postface oo uu qoray Terence Dooley. Waxaan kaaga tagay a xiriiri wax ka bedel.
Buugaagta buugaagta lagu qoro, Penelope Fitzgerald waxay ku sheegeysaa sheekada Florence Green, carmal dooneysa inay buugaagta buugaagta ka furato magaalo yar, Hardborough, halkaas oo ay ku nooleyd 8 sano. Waxaa la dhigay 1959, sidaan ku sheegnay tuulo yar oo kalluumeysi oo ku taal England.
Qormadan Amartya Sen, Abaalmarinta Nobel ee dhaqaalaha 1998, ayaa ka hadlaysa muhiimadda dimuqraadiyadda, qiimaheeda oo nooga sheekeeya khuraafaad kala duwan oo been abuur ah oo ka soo ifbaxa galbeedka iyo caalamiyeynta.
Qoraalka uu tafatiray guriga daabacaada El viejo topo iyo turjumaad uu qoray Javier Lomelí Ponce, wuxuu naga dhigayaa inaan dib u milicsano cawaaqibka dimuqraadiyadda iyo waxa ay uga dhigan tahay dal inuu aasaaso nidaamkan.
Buuggu wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood:
Dimuqraadiyadda iyo xididdada caalamka.
Dimuqraadiyadda oo ah qiime caalami ah.
Xukunnada caalamiga ah.
Bogga1 Bogga2 ... Bogga4 Xiga →